यसरी खानुहोस आलस हुन्छन , नियमित सेवन गर्दा आलसबाट पाइने फाइदा यस्ता छन्!!! – News Nepali Dainik
यसरी खानुहोस आलस हुन्छन , नियमित सेवन गर्दा आलसबाट पाइने फाइदा यस्ता छन्!!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७ समय: ८:१३:३१
के पाइन्छ आलसमा :एक तबल चम्चा अर्थात् १५ ग्राम आलसमा निम्न तत्वहरु पाइन्छ। क्यालोरी : ३७, प्रोटिन : १.३ ग्राम, कार्बोहाइडेड : २ ग्राम, फाइबर : १.९ ग्राम, चिल्लो : ३ ग्राम, ओमेगा फ्याटी एसिड : १५९७ एमजी, स्याचुरेट फ्याट ०.३ ग्राम, मनोअन स्याचुरेट फ्याट : ०.५ ग्राम, पोलिअनस्याचुरेट फ्याट : २ ग्राम, भिटमिन बी१ : ८ प्रतिशत, भिटमिन बी६ : २ प्रतिशत, फोलेट : २ प्रतिशत, क्याल्सियम : २ प्रतिशत, आइरन : २ प्रतिशत, म्याग्नेसियम : ७ प्रतिशत, पोटासियम : २ प्रतिशत, फस्फोरस : ४ प्रतिशत
नियमित सेवन गर्दा आलसबाट पाइने फाइदा:– आलसमा अत्यधिक मात्रामा ओमेगा–३ फ्याट्टी एसिड पाइन्छ, जुन हाम्रो शरीरलाई नभई नहुने चिल्लो पदार्थमध्येको एक हो। – क्यान्सर जस्तो भयानक रोग लाग्नबाट जेगाउँछ। – उच्च रक्तचाप हुनेलाई आलस अमृतसरह मानिन्छ। – आलसमा प्रोटिन प्रशस्त पाइने हुँदा साकाहारीका लागि पनि उत्तम मानिन्छ। – सुगर लेबल सन्तुलन गर्न पनि आलसले पूर्ण रुपमा मद्दत पुर्‍याउँछ। – भोग जगाउने काम गर्छ र वजन सन्तुलन राख्न पनि विशेष भूमिका खेल्छ। – मुटुसम्बधी रोगीका लागि पनि नियमित आलस सेवन गर्नु उत्तम मानिन्छ।
खाना पचाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। – मधुमेह रोगीका लागि फाइदा पुर्‍याउँछ।
(आलसको नियमित प्रयोगले अनुहारमा चमक थप्दै जान्छ।)
*** नरम र सिल्की कपालका लागि पनि आलस अति उपयोगी छ। आलसले मुटुका धमनीहरूमा रगत जम्नबाट जोगाउँछ। कब्जियत, पाइल्स, फिस्टुलाका बिरामीलाई फाइदा गर्छ। छालासम्बन्धी रोगहरू एग्जिमा, डन्डीफोर, दाद, चिलाउने आदि हटाउँछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाइरहेको हुन्छ।
शरीरको बोसो घटाएर स्फूर्त बनाउन यो उपयोगी छ। आयुर्वेदमा ‘दैविक भोजन’का रूपमा चित्रण गरिएको छ। शैशवावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मका हरेक दिन यो मानव स्वास्थ्यका लागि उपयोगी मानिन्छ। भ्रुणको विकास गराउनुका साथै छाला, केश तथा नङलाई स्वस्थ राख्न सघाउँछ।– रातो रक्तकोष निर्माण र मस्तिष्क एवं स्नायुको कार्यप्रणालीमा सहयोगी हुने भएकाले यसको उपयोग आवश्यक मानिन्छ। आलसमा पाइने लिग्नान्सको इस्ट्रोजेनिक गुणले महिलाको महिनावारीमा हुन सक्ने तलमाथिलाई पनि नियमित बनाउन मद्दत गर्छ। स्त न, प्रोस्टेट, कोलोन, पाठेघर क्यान्सरका बिरामीले आलस खानु राम्रो मानिन्छ।
( आलसको सेवनले पाचन क्रियामा सघाउँछ र कब्जियतलगायत पाचनसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्छ।)
आलसले चाँडै बुढो देखिनबाट जोगाउनुका साथै कोषिकाहरु नष्ट भएपछि पुनर्जनन (सेल रिजेनेरेसन) हुने प्रक्रियामा सघाउँछ।– कतिपयलाई ग्लुटिन भएको खाना खान हुँदैन। यसले आन्द्रामा समस्या ल्याउँछ र खाएको पच्दैन। यो वंशाणुगत रोग पनि हो। आलसमा ग्लुटिन हुन्न। त्यसैले ‘सेलियाक रोग अर्थात् ग्लुटिन एलर्जी भएकाहरुलाई पनि यो लाभदायक छ।– आलसमा पाइने घुलनशील रेशाले बोसो र कोलेस्ट्रोललाई बल्झाएर लिन्छ जसले गर्दा ती शरीरमा सोसिने मात्रा कम हुन जान्छ। त्यस्तै पित्तमा भएको कोलेस्ट्रोललाई पनि आलसको रेशाले लिन्छ र दिशाबाट बाहिरिन्छ।
(आँखाको लागि पनि राम्रो हुन्छ। खासगरी आँसु कम भएर आँखा सुख्खा हुने र पोल्नेहरुको लागि ओमेगा–३ को सेवन धेरै लाभदायक हुन्छ।)
*** सामान्यतया माछाको तेलमा इपिए र डिएचएल दुई प्रकारका ओमेगा–३ फ्याट्टी एसिड पाइन्छन्, तर आलसमा पाइने चाहिँ ‘एएलए’ अर्थात् अल्फा लिनोलेनिक एसिड हो। खासमा यी फ्याट्टी एसिडहरु सुन्निने, दुख्ने कम गर्ने ‘एन्टि–इन्फ्लेमाटोरी’ गुणयुक्त र मुटुसम्बन्धी रोगहरु कम गर्नमा उपयोगी मानिन्छन्।
आलस कसरी खाने ? के के बन्छ ?आलस धेरै किसिमले खान सकिन्छ। यसलाई अंकुराएर खाँदा पनि हुन्छ। आलसको छोप बनाएर पनि खान सकिन्छ। आलु–काँक्रोको अचारमा तिलको साटो आलास मिलाउनु उत्तम मानिन्छ। आलसलाई भिजाएर विभिन्न फलफूलसँग मिसाई लस्सी बनाएर पिउन पनि सकिन्छ। आलसको सुप पनि अत्यन्त स्वास्थ्यकर मानिन्छ। सलादको ड्रेसिङ बनाएर खाँदा पनि स्वादिस्ट र स्वस्थ्यकर हुन्छ। बर्गरको बन या अन्य ब्रेड बनाउँदा आलसको गेडा हालेर बनाउन सकिन्छ। आलसको तेल प्रयोग गरेर विभिन्न खाना पकाउन सकिन्छ। विभिन्न पिठोमा आलस मिसाएर रोटी पनि बनाउन सकिन्छ। दही र महमा मिसाएर पनि खान सकिन्छ।
Last Updated on: January 27th, 2021 at 8:13 am